गुण्डागर्दी निस्तेज पार्ने अभियानमा १५ जना पक्राउ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गुण्डागर्दी निस्तेज पार्ने अभियानमा १५ जना पक्राउ
पोखरा । कास्की प्रहरीले गुण्डागर्दी निस्तेज पार्ने अभियानअन्तर्गत १५ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ।
गुण्डागर्दी लगायत हप्ता असुली, धम्की, मिटर व्याज, बेटिङ लगायत क्रियाकलापमा संलग्न उनीहरुलाई प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो।
प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले जिल्ला प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेपछि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनिकरणमा विशेष जोड दिइएकोे छ।
सो क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई वैशाख ३० देखि हालसम्म ठूलो संख्यामा धमाधम पक्राउ गर्दै आवश्यक अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको छ।
गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ पर्नेमा लमजुङ घर भई हाल पोखरा १२, सिंगापुर बस्ने ३४ वर्षे ललित कुमार गुरुङ, स्याङजा रापाकोट घर भै हाल पोखरा ७, घारीपाटन बस्ने वर्ष ३७ का चन्द्र गुरुङ, पोखरा ९ स्थायी घर भै हाल पोखरा १५ रामबजार बस्ने ३७ वर्षे सनिराज डंगोल, पोखरा ११ का ४० वर्षे सुमन श्रेष्ठ, स्याङजा पुतलीबजार घर भै हाल पोखरा २७, तालचोक बस्ने वर्ष २९ का पुनम गुरुङ, स्याङ्जा बाडखोला घर भै हाल पोखरा १०,कुँडहर बस्ने वर्ष ३१ का प्रकाश गुरुङ, म्याग्दी अन्नपूर्ण घर भै हाल पोखरा ११ फूलबारी बस्ने वर्ष ३२ का धनकुमार पुर्जा, पोखरा ३३ स्थायी घर भै हाल पोखरा सेदीडाँडा बस्ने वर्ष २९ का महेश छोटा भन्ने महेश अर्याल छन्।
यस्तै, पोखरा १७ बिरौटाका ३२ वर्षे सुजन लामा, पोखरा १४ काजीपोखरी बस्ने वर्ष २३ का जीवन थापा, सोही ठाउँका २३ वर्षे विजय गुरुङ, पोखरा १७ छोरेपाटन बस्ने वर्ष ३२ का नवीन गुरुङ, पोखरा ६ लेकसाइड बस्ने वर्ष २५ का विजय रानाभाट, पोखरा अर्चलबोटका ३४ वर्षे रोहित सुनार र पोखरा बागलुङ बसपार्कका २८ वर्षे विकास गुरुङ छन्।
यस्तै, प्रहरीले विभिन्न २ सय ४३ मुद्दामा ४ सय ६६ जना पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये ५९ जना महिला छन् । विभिन्न प्रकारका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत १ सय ६७ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। त्यसपछि क्रमशः लागु औषधका २२, चोरीका १८ छन्।
उता, विभिन्न मुद्दाका फरार अपराधीमध्ये ७६ जनालाई पक्राउ गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले जानकारी दिए । ती मध्ये ७ महिला छन्। प्रहरीले जरिवानास्वरुप १५ लाख १ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ।
जरिवाना न्यूनतम ५ सय देखि ५ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको हो। पक्राउ परेको अभियुक्तमा कत्र्तव्य ज्यान, लुटपिट, चेक अनादर, चोरी, लागु औषध, लिखित गाली बेइज्जती, सरकारी छिाप किर्ते, जालसाजी, केही सार्वजनिक अपराध लगायत मुद्दामा संलग्न रहेका छन्।
ट्राफिक कारबाही तथा राजश्व तर्फ ८ हजार ५ सय ६६ जना कारबाही परेकोमा ६० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको जनाइएको छ। जस अन्तर्गत मापसे कारबाही २ सय १४, मोडिफाई ४४, मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी १ सय २४ वटा, प्रेसर हर्न प्रयोग गर्ने १० र फुटपाथ कारबाही ४ सय ७० वटा छन्।
यौन व्यवसायमा संलग्न २७ पुरुष र ५१ जना महिलालाई पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारबाही गरिएको छ। हराएका र चोरीमध्ये ४६ थान मोबाइल फेला परेका छन्।
प्रहरी छोरेपाटन, ट्राफिक र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गरी २८ वटा नयाँ सिसी टीभी क्यामरा जडान गरेको छ। यसअघि २५ वटा क्यामरा रहेका थिए।
प्रहरीले १२ बुँदे कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने, गुण्डागर्दी निस्तेज पार्ने, लागु औषध निस्तेज पार्ने, घरेलु हिंसा, महिलामाथि हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने, मिटर व्याजमा निन्त्रण गर्ने, यौन विकृति, जुवातास, अवैध मदिरा बिक्रीमा विशेष निगरानी राख्ने गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, रामबजार र बगर तथा इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट मातहतबाट विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप संलग्न रहेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि २ हजार ८ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेकोमा तीमध्ये २ सय ९२ माथि मुद्दा दायर गरेको छ भने २ हजार ५ सय ७७ जनालाई सम्झाइ बुझाई जिम्मा लगाइएको छ।